Global Voices teny Malagasy » Shina: Vitanao ve ry Obama? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Janoary 2009 3:52 GMT 1	 · Mpanoratra Bob Chen Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Politika
Nahavita ny fianianany amin'ny mahafiloha Afrikana Amerikana azy voalohany, sy ao anatin'ny fitiavan'ny vahoaka azy indrindra i Obama. Nahavory vahoaka hatramin'ny 2.000.000  moa ny fametrahana azy amin'ny toerany ary tapatapaky ny firefodrefotry ny tehaka sy ny hora-pihobiana tsindraindray eny ny kabariny. Mireondreona avy amin'ny mpanatrika mangoro-potsy ny antsoantso miady rima “O-ba-ma!”, injao mihira sy mandihy ho an'ny mpitondra azy vaovao ao anaty ranomasom-pifaliana ny olona. Fa na dia mbola ao anatin'ny ririnina aza, mikoropadropaka anatin'ny dobon'ny krizy aza, dia nahazo andraikitra anatin'ny fanantenana lehibe sy ny fahefana ny lehilahy, izay heverina ho ny fanovana voalohany indrindra takian'ny vahoaka.
Ao amin'ny Tianya, lahatsoratra iray efa nahazo fanehoan-kevitra takelaka roa  no nanainga adihevitra mahaliana momba an'i Obama.
Avelao-aho-hilaza-zavatra (让我也说几句吧) , kosa manambara hoe:
Hoy ny mpitari-dresaka  :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/01/24/1528/
 hatramin'ny 2.000.000: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/barackobama/4300880/Barack-Obama-inauguration-Two-million-turn-out-to-greet-their-new-president.html
 lahatsoratra iray efa nahazo fanehoan-kevitra takelaka roa: http://www.tianya.cn/publicforum/content/worldlook/1/206089.shtml
 Avelao-aho-hilaza-zavatra (让我也说几句吧): http://www.tianya.cn/browse/Listwriter.asp?vid=14694857&vwriter=%E8%AE%A9%E6%88%91%E4%B9%9F%E8%AF%B4%E5%87%A0%E5%8F%A5%E5%90%A7&idWriter=0&Key=0